नयाँ वर्ष, चाउमिनको स्वाद र वृद्धाको उद्धार | शहरबाट शब्दहरु
« सपनाभित्रको ‘सुन्दर संघर्षहरू’
आमा, आत्मियता र आनन्द »
नयाँ वर्ष, चाउमिनको स्वाद र वृद्धाको उद्धार
पुस १७, २०७१ अर्थात जनवरी १, २०१५ (बिहिबार) । आज अग्रेजी नयाँ वर्षको चहलपहल छ । तरपनि जाँगर भने उही सदा झैं कार्यालयभित्रै बस्ने र नियमित काम । केही साथीहरूले सोधेको पनि हो । आज कतै नजाने ? बिहानैदेखि भेटघाट थियो । ललितपुरका पत्रकार साथी अमृत तिल्मिसिना र रमेश घिमिरे (नयाँ मित्र) का रूपमा बस्यौं । गफियौं । कफी गफ भयो । त्यहीबेला पुराना मित्र सम्मर खड्कासँग भेट भयो । भाउजुको स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल आएका थिए उनी । धेरैपछि अंगालो मारेर बिछोड बिर्सियौं हामीले र साट्यौं नयाँ वर्षको शुभकामना पनि ।
त्यसपछि कार्यालय समयको टन्टाले अनलाइन पत्रिका पस्यौं । साथीहरूको नयाँ वर्षकै दिनपनि संस्थागत मायाले हो की । सबै चाँडै नै आए । आज लामो छलफल चल्यो । संस्थागत र आन्तरिक बैठकमा धेरै कुराहरूको राम्रो उजागार र समाधानपनि निस्कियो । आज बैठकको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिता बाटाजुबाट भयो । बैठकमा शान्ति सापकोटा, मन्दिरा सापकोटा, फातिमा बानु, भवानी दुलाल, सुमित्रा ठकुरी, शिव धिताल, राधिका श्रेष्ठ, रूपा श्रेष्ठ र म थिएँ । सबै साथीहरूका सल्लाह र सुझावबाट निष्कर्ष आयो । हामी जुट्यौं भने धेरै कुरा गर्न सक्छौं । त्यसपछि बैठक सकियो । दिनभरको चिसो मौसममा चाउमिन खाएर नयाँ वर्ष मनायौं । साँझ नयाँ अनलाइन पत्रिकाकर्मी साथीले डेक्स सम्हाले । यस्तै यस्तै दिन बित्यो ।
आज एउटा समाचार प्रभावले अनलाइन पत्रिकाकर्मी नयाँ जिम्मेवारी थपिएको महसुस भयो । हामीले दुईदिन अघि लेखेको वृद्धा आमा सम्बन्धि समाचारका कारण आमाको उद्धार गरिने भएछ । हामी खुशी भयौं । आफूहरूमा दायित्वबोध भयो ।
आजदेखि लेखन यात्रा र डायरीलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने मनसाय बोकेर लेख्न बसे । लेखियो । अस्तु
This entry was posted on जनवरी 1, 2015 at 12:47 अपराह्न and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.